Fivadihan-draharaha - World Trade Exchange
Avereno manodidina ny 30 andro ny orinasanao
AOKAO TSARA NY FANAVOTANA NY FIVAROTANAO SY NY VOLA, 10 KA hatramin'ny 100 INDRINDRA 30 andro!
Mihena ve ny vola azo? Ao anaty fahasimbana ve ny orinasa? METY Miaina fatiantoka ara-bola ve ianao?
Ireto dia soritr'aretina REHETRA izay ilain'ny orinasanao ……. MILA TURNAROUND MAORA. Orinasa manana vola mitentina 3.97B $ amin'ny banky, miasa amin'ny 30% ny fahaiza-manao ary manana fatiantoka ara-bola isan'andro, dia navadika tao anatin'ny 30 andro ary nahatratra ireto valiny manaraka ireto:
Nahazo fampidiram-bola tsy misy zanabola $ 10B $ hanohanana ny asan'ny orinasa.
Namidy $ 7.5B sandan'ny fananana sy fanatobiana entana ao anatin'ny 24 ora.
Nandoa trosa $ 3.97B amin'ny banky ao anatin'ny 30 andro amin'ny vidiny aotra ho an'ny orinasa.
Nihena ny famoahana vola ho an'ny fandaniana 87% ary mampitombo ny fividianana isam-bolana.
Kaonferansa famatsiana $ 25B azo antoka ao anatin'ny 30 andro.
Fitaovana vaovao azo $ 2.5B ao anatin'ny 30 andro amin'ny vidiny aotra ho an'ny orinasa.
Nampitombo ny vola niditra 5,500 30% tao anatin'ny XNUMX andro, nefa tsy nandany vola tamin'ny marketing.
WTE afaka manampy anao hahatratra valiny mitovy amin'izany ihany koa ary hanova ny orinasanao ao anatin'ny 30 andro raha mampiditra ny "Serivisy momba ny varotra fihodinana varotra izahay."
Amin'ny alàlan'ny "Business Turnaround Consulting Service" no hahazoanao ireto tombony manaraka ireto:
WTE Hanome anao $ 10M ka hatramin'ny $ 100B amin'ny varotra CREDIT TSY MAINTSY AMIN'NY FITEHIRIZAM-BOKIN'NY BUSINESS
Tsy toy ny famatsiam-bola amin'ny banky, tsy heverinay ny isa nominao, ny vola miditra, ny vola, ny fametrahana, ny fanananao, ny fiarovana antoka, ny fampodiana hetra, ny fanambarana ara-bola, ny tantara nindrana, na ny fahaizanao mamerina ny indram-bola, alohan'ny hanomezana anao vola manitatra. trosa.
Tsy misy zana-bola alaina amin'ny trosa fanitarana orinasa. Tsy misy zanabola. Ny tena zava-dehibe dia tsy ilaina ny famerenam-bola raha tsy manampy anao hamerina ny trosanao izahay. Rehefa avy nanome anao ny trosa fanitarana orinasa izahay, hanampy anao koa izahay hamorona ny vola miditra ilaina amin'ny fanefana ny trosa.
Inona no azonao ampiasaina amin'ny fampiroboroboana ny varotra?
Mamolavola sy mandefa vokatra na serivisy vaovao
Mandrosoa fanentanana marketing vaovao ary manao doka amin'ny haino aman-jery eo an-toerana sy iraisam-pirenena (gazety, magazina, radio ary fahitalavitra)
Hividy na hamerina handoa vola ny karazan-trano sy trano fivarotana (toeram-pivarotana, trano fisakafoanana ary trano misy birao sns.)
Mizarazara ho lasa orinasa vaovao na tsena (an-trano na any ivelany)
Tohizo ary ataovy azo antoka ny asan'ny orinasao
Ampitomboy ny tahiry Inventory hahafahana manatanteraka ny baiko fivarotana bebe kokoa
Hanitatra / hanamboatra ny toerana misy anao, trano fanatobiana entana, na birao misy anao
Manakarama sy mampiofana mpiasa fanampiny manana fahaizana manokana na teknika
WTE Hanampy anao handoa ny trosanao rehetra afaka 7 andro
WTE dia hanampy anao handoa ny trosan'ny trosanao amin'ny olona tsirairay, ny andrim-panjakana ara-bola na ny fikambanana nefa tsy mila mandany vola ianao. Na ny vola aloanao dia $ 1 tapitrisa, $ 10 tapitrisa, $ 100 tapitrisa, $ 100 miliara, na mihoatra, tsy maninona izany.
WTE HANAMPY ANAO HANANA FANAVOTANA NY VAROTRA AO AMIN'NY BUSINESS-nao amin'ny 90%
WTE HANAMPY ANAO MBA HAMPITRAHANA VOLA HATRANY 1,000% afaka 30 andro
WTE dia hanampy anao hampitombo ny fidiram-bolanao amin'ny 1,000 30% na mihoatra ao anatin'ny XNUMX andro tsy misy risika, ezaka, na fandaniana takiana aminao.
WTE Hanampy anao hahatratra ny vinavinam-bola amin'ny varotra 12 volana ao anatin'ny 24 ora
WTE HANAMPY ANAO MBA HAMONJY NY RESAKA BUSINESS REHETRA
WTE HANAMPY ANAO HANDEFITRA NY OLANA REHETRA AMIN'NY BUSINESS AND MARKETING REHEFA 30 andro
WTE HANAMPY ANAO HITADIAVA REHETRA REHETRA NY ASETO TSY MISY FAMPANDROSOANA SY NY VOAFIDITRA AMIN'NY SORATRA BOKY FENO ISIKA 24 ora
Orinasa iray momba ny famerenan'ny diloilo dia nahazo $ 2.8 milliards tao amin'ny CREDIT TRADE
Orinasa mpanadio solika nahazo 2.8 miliara dolara tsy nisy fiantohana ara-bola na fiampangana zanabola tamin'ny alàlan'ny serivisinay. WTE nanampy ny orinasa hamoaka ny vola miditra ilaina amin'ny fanefana ny trosa.
Orinasa BIOPHARMACEUTICAL dia nahazo orinasa Orinasa RIVAL $ 2.3B tamin'ny vidin'ny ZERO.
Orinasa biofarmasialy no mamatsy vola ny fisian'ny orinasa mpifaninana iray hafa mitentina $ 2.3 miliara amin'ny alalàn'ny WTE amin'ny vidiny aotra. WTE nanampy ny orinasa hamoaka ny vola miditra ilaina amin'ny fanefana ny trosa.
ORINASA TSY MAINTSY MOMBA NY FANAMPOAN-TRANO nandoa vola $ 4.5B izay nampiasa CREDIT TRADE.
Orinasa mpanamboatra volabe manana trosa 4.5 tapitrisa dolara amin'ny banky, miasa amin'ny 20% ny fahaizany ary manao fatiantoka ara-bola isan'andro, dia navadika tao anatin'ny 30 andro. WTE nanampy ny orinasa hamoaka ny vola miditra ilaina amin'ny fanefana ny trosa.
23 PRIVATE JETS $ 575M mendrika AZA AMIN'NY VOLA ZERO.
Orinasa mpampitan-tsambo fiaramanidina manokana no nahazo fiaramanidina manokana 23 $ 575 tapitrisa $ amin'ny vidiny aotra. WTE nanampy ny orinasa hamoaka ny vola miditra ilaina amin'ny fanefana ny trosa.